Manchester United oo go’aan kama dambeys ah ka gaartay arinta ku aadan casilaada Jose Mourinho – Gool FM
Manchester United oo go’aan kama dambeys ah ka gaartay arinta ku aadan casilaada Jose Mourinho
(Manchester) 18 Dis 2018. Shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa xaqiijisay in maamulka kooxda Manchester United ay go’aansadeen in Jose Mourinho uu sii ahaado macalinka Red Devils, isla markaana aan laga fasaxi doono shaqada, kadib markii ay soo baxeen warar ku aadan inuu ka tagayo garoonka Old Trafford.
Manchester United ayaa haatan ku jirta xilli ciyaareed niyad jab ah, maadaama qaab ciyaareedka Jose Mourinho iyo wiilashiisa Red Devils uusan fiicneen.
Manchester United ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, iyadoo 19 dhibcood u jirta hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee kooxda Liverpool, kadib guuldaradii 3-1 ahayd ay kala soo laabteen garoonka Anfield kulankooda ugu dambeeyay.
Warar soo baxay ayaa lagu sheegay kadib guuldaradii Manchester United kasoo gaartay Liverpool in Jose Mourinho uu si xoogan ugu dhow yahay ka tagista shaqada tababarka ee kooxda Red Devils.
Laakiin shabakada caanka ah ee “Sky Sports” ayaa sheegtay inaysan jirin wax isbadal ah ee ku aadan dhanka tababarka kooxda Manchester United, isla markaana Jose Mourinho uu sii wadan doono shaqadiisa marka ay ugu yartahay ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan 2018/2019.
Shabakada ayaa hadalkeeda kusoo gabagabeysay in la ogaaday in Manchester United aysan caadeysanin in ay macalin kasta ka fasaxdo shaqada, bartamaha xili ciyaareedka si walba uu xaalka ugu xun yahay.
Real Madrid oo go’aamisay qiimaha ay Manchester City kaga iibineyso Francisco Isco
Mauro Icardi oo ka farxiyay Taageerayaasha Chelsea, laakiin Xaaskiisa ayaa....